रुसले कोरोना भ्याक्सिन बनाएसँगै पलायो आशाको किरण, नेपालमा कहिले आइपुग्ला भ्याक्सिन ? – Jagaran Nepal
सँसारका शक्तिशाली र धनी देशहरुले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन विकास गरी प्रयोगको समेत तयारी गरेका छन् । तर, आर्थिक रुपमा विपन्न देशहरुले भ्याक्सिन कहिले प्रयोग गर्न पाउलान् ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ । नेपालमा भ्याक्सिन कहिले आइपुग्ला ? यसलाई केलाउँदा भ्याक्सिन कति प्रकारका उत्पादन हुन्छन ? कुन कुन देशले उत्पादन गर्छन् ? कति मात्रामा उत्पादन गर्छन् ? मुल्य कति पर्छ ? माग र आपूर्तिको अवस्था कस्तो हुन्छ ? उत्पादन गरिएका भ्याक्सिनको प्रभावकारिता, सुरक्षा र विश्वसनीयता के हुन्छ ? विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबैमा पहुँच पुर्याउने कस्तो भुमिका खेल्छ ? भन्ने यथार्थलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
धनी देशहरु अहिले नै भ्याक्सिन प्रयोग गरेर ढुक्कसाथ आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुने तयारीमा पुगिसकेका छन् । कोरोना भाइरसले समस्यामा पारेको नेपाल जस्तो देशहरुमा यस्तो तयारी देखिदैन । यसले कम्तिमा एक वर्ष आर्थिक गतिविधिमै समस्या पारिरहने खतरा बढेको छ । भिडियो